15 May oo maanta looga dabaaldegayo Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Xuska 15-ka May oo ah maalintii 71 sano ka hor la aasaasay Ururkii Dhallinyarada Soomaaliyeed ee xurriyadda sabab u noqday ee SYL ayaa maanta lagu qabanayaa caasimadda Soomaaliya ee Mqudisho iyo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka.
Munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayo xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa saaka ka socota garoonka kubada cagta Banaadir ama Koonis ee magaalada Muqdisho.
Xuska munaasabada maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May ee saaka ka socda garoonka kubada Cagta Banaadir ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha.
Garoonka kubada cagta Banaadir oo munaasabadu ka dhaceyso ayaa waxaa ku sii qulqulaya dadweyne farabadan oo ay ka mid yihiin dhalinyaro.
Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowlada Soomaaliya ayaa la filayaa iney ka qeyb galaan munaasabada xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta ka socota garoonka kubada cagta Banaadir.
Wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa shalay soo gebagebeeyay tartamo isborti oo lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada kaas oo ay ka qeybqaadanayeen kooxaha heerka koobaad ee dalka Soomaaliya.
Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, Khaalid Cumar Cali uu koobka maalinta dhalinyarada guddoonsiiyay kooxda Kubada Koleyga ee I.L.S. oo ka guuleysatay kooxda Horseed.
Mareykanka oo labo jibaaraya tayeynta & dhismaha ciidanka Soomaaliya